SanDisk weputara kaadi microSDXC 256GB 4GB maka XNUMXK | Gam akporosis
SanDisk na-ebupụta ngwa ngwa 256GB microSD dị
SanDisk dị nnọọ mara ọkwa a di na nwunye nke ọhụrụ na kaadị ebe nchekwa na-kpọmkwem ezubere iche maka nchekwa nke nnukwu data ma rụọ ọrụ na nnukwu ọsọ, dị mkpa maka arụmọrụ kachasị mma na kamera vidiyo na ụdị ngwaọrụ ndị ọzọ.
Kaadi ebe nchekwa ohuru gunyere 256GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I na SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Premium Edition. Nke mbụ akara dị ka ngwa microSDXC ngwa ngwa na klas ya, na-eme ya nhọrọ kachasị mma mgbe mmadụ chọrọ iji uru nke ndekọ 4K na egwu egwu.
«Kaadị microSD anyị dị ugbu a etiti nke ọtụtụ ngwaọrụ ndị na-azụ ahịa anyị nwere ọ excitedụ ọ bụghị naanị iji kaadi microSD kachasị ọsọ n'ụwa bulie ụlọ mmanya ahụ, kamakwa inye ezinụlọ nke kaadị microSD 256GB microSD nke na-enye ndị ahịa mgbanwe dị mkpa ha chọrọ iji weghara ndụ n'akụkụ ya niile.
Kaadi ebe nchekwa ohuru bu ezigbo maka iji na smartphones, drones na ese foto na-ekele nnukwu ikike na arụmọrụ dị mma. Nchekwa nchekwa ahụ zuru oke maka ịrụ ọrụ na igwefoto vidiyo 4K na foto foto dijitalụ dị elu. SanDisk Extreme microSDXC UHS-I 256GB kaadị na-enye ogu ogugu nke ruru 100MB / s ma dee ihe ruru 90MB / s. Ọ nwere ike ịchekwa ihe dị ka awa 14 nke vidiyo 4K.
256GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Premium Edition kaadị na-elekwasị anya na mbadamba na ndị ọrụ smartphone ndị na-achọghị ịgbanye ohere na ngwaọrụ ha. Kaadị ahụ nwere ike ịchekwa vidiyo 24 nke vidiyo na Full HD ma nyefe na ọsọ ọsọ ruo 95MB / s.
SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Premium Edition bụ otu ego nke $ 149,99 mgbe 256GB SanDisk Extreme microSDXC UHS-M ga-abata na nkeji nke anọ nke afọ maka ego nke $ 199,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » SanDisk na-ebupụta ngwa ngwa 256GB microSD dị
Etu ị ga-esi mee ka Motorola gosipụtara ihe ngosi ọ bụla gam akporo
VPInput bụ ngwa LG iji chịkwaa LG G5, G4 na V10 na kọmputa